Adobe Premiere Rush dị ugbu a maka Galaxy S10, S9 na Note 9 | Gam akporosis
Adobe Premiere Rush bụ ngwa ọhụrụ nke anyị na-atụ anya ya na ekwentị anyị gam akporo ma malite ya na iOS, Mac na PC ọnwa asatọ gara aga, kpomkwem na Ọktoba afọ gara aga.
Adobe na-egosi na ngwa a adịla kwalitere site na ebumnuche nke inweta nsonaazụ ọkachamara n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe, nke mere na onye ọ bụla, nwere ntakịrị nlekọta na ebumnuche, nwere ike ịkekọrịta vidiyo dị ịtụnanya na netwọkụ mmekọrịta site na ekwentị ha.
1 Na-emepụta ọdịnaya vidiyo dị mma
2 Ihe niile Adobe Premiere Rush na-enye anyị
Na-emepụta ọdịnaya vidiyo dị mma
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Premiere Rush, ịbụ a free ngwa, ọ bụ ezie na amachi, na-enye anyị ohere site na mkpanaka anyị ịnwe ụfọdụ ngwaọrụ anyị na-efufu na ụdị zuru ezu maka PC n'onwe ya na nke Adobe Premiere mara. Ya mere na Premiere Rush ị nwere ike idezi vidiyo, gbakwunye ederede na ọbụlagodi vidiyo iji mepụta vidiyo dị elu site na ekwentị mkpanaaka gị.
Anyị na-ekwu maka otu ngwa vidiyo na-edezi vidiyo kachasị ewu ewu na ụlọ ahịa iOS, yabụ ọ bụ nbịaru iji nwee ike ịnwe ya na mkpanaka gam akporo anyị site n'otu ụbọchị taa. Adobe weputara ya n'efu ejedebe na mbupụ 3. Mgbe njedebe a gasịrị, ị ga-agafe ndenye aha na Cloud Cloud nke pụtara ịkwụ ụgwọ € 9,99 kwa ọnwa.
Otu njedebe nke mbupụ 3 nke nwere ike ịbịaru iji nwalee ngwa na ọnọdụ ma chọpụta ọ bụrụ n’ezie na ọ ga-adabara anyị niile na ọ na-enye anyị maka ịkwụ ụgwọ nke ndebanye aha ahụ iji nwee ike ịmepụpụ na-akparaghị ókè. Ọ bụghị ihe a na-adịghị ahụkebe iji mee na ngwa ngwa Adobe, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ya ka ị ga-esife site na igbe iji kpoo uru ya niile. dị ka Adobe Lightroom.
Ihe niile Adobe Premiere Rush na-enye anyị
Dika vidiyo bu ihe eji eme otutu ihe eji eme ihe, Adobe Premiere Rush nwere ike ibu ihe kariri nke oma n'ihi na odighi acho komputa ichoro ihe nlere vidiyo di mfe. Anyị na-ekwu banyere ihe anyị nwere ike tinye ntughari vidiyo, belata mkpachị, gbakwunye ụda, dekọọ vidiyo site na ngwa ahụ n'onwe ya na ọbụna nweta usoro nzacha nke ị ga-eji dee ihe na vidiyo ndị ahụ ị ga-ebipụta na netwọkụ mmekọrịta kachasị amasị gị.
A na-eme ihe niile site na interface ejiri zuru oke maka mkparịta ụka site na smartphone yana na ịdị mfe nke na-eme ka ọ dị mfe mgbe ị na-agbakwunye vidiyo, belata vidiyo ma ọ bụ tinye ederede ahụ dị iche iche Akara ókwú na ndabara atọrọ atọ. Eziokwu bụ na ọ bụ ihe obi ụtọ igwu egwu na Adobe Premiere Rush ma mee ka anyị bido chee na ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ya. Luckily anyị nwere ike iji 3 na-ebupụ iji nwalee.
Ma n'ezie, ị ga-enwe a usoro nke obere vidiyo nke ndabara, ihe echichi karịrị 400 megabytes ... Site na ha ị nwere ike ịhụ otu ọ dị mfe idezi vidiyo iji nwee ngwa ọrụ niile na ekwentị anyị. Anyị na-enyocha njirimara ya niile:
Igwefoto agwakọta maka ịdekọ vidiyo kacha mma.
Dọrọ na dobe ihe site na nchịkọta vidiyo n'ụzọ dị mfe.
Bee vidiyo, dozie ọdịyo, mee ka agba dịkwuo mma, tinye aha, ntughari, overlays olu.
Usoro iheomume vidiyo di iche iche na 4 na mkpokọta maka vidiyo na egwu 3 maka ọdịyo.
Karịa 100 Motion Graphics ndebiri.
Jiri Adobe Sensei AI iji dozie, na-ehicha, ma na-edozi ụda na akpaghị aka.
Gbanwee nha na nghazi vidiyo.
Tinye onyonyo onyonyo.
Hazie oge na Instagram, Facebook, na YouTube.
Adobe Premiere Rush maka Galaxy S9, S10 na Note 9 ugbu a ka dị naanị a na-atụ anya na Samsung ga-ebufe ya na ọdụ ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya. A elu-edu video nchịkọta akụkọ ike na dezie vidiyo si n'ebe ọ bụla na-enweghị mkpa maka kọmputa. Ọganihu maka gam akporo na nke ị nwere site taa.
Adobe Premiere Rush - Onye nchịkọta vidiyo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Adobe na-ebuputa Premiere Rush ka ị nwee ike ịmepụta ma hazie vidiyo dịka ọ dịtụbeghị
The Huawei Mate 20 Pro wepụrụ gam akporo Q preview